YH HYDRAULIC - I-China Hydraulic Hose Fittings, i-Hydraulic Ferrules, i-Hydraulic Machines Supplier
email: yokuthengisa2@yhhoseassembly.comInombolo: + 86-15824530883 Select LanguageAfrikaansAlbanianAmharicArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBengaliBosnianBulgarianCatalanCebuanoChichewaChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CorsicanCroatianCzechDanishDutchEnglishEsperantoEstonianFilipinoFinnishFrenchFrisianGalicianGeorgianGermanGreekGujaratiHaitian CreoleHausaHawaiianHebrewHindiHmongHungarianIcelandicIgboIndonesianIrishItalianJapaneseJavaneseKannadaKazakhKhmerKoreanKurdish (Kurmanji)KyrgyzLaoLatinLatvianLithuanianLuxembourgishMacedonianMalagasyMalayMalayalamMalteseMaoriMarathiMongolianMyanmar (Burmese)NepaliNorwegianPashtoPersianPolishPortuguesePunjabiRomanianRussianSamoanScottish GaelicSerbianSesothoShonaSindhiSinhalaSlovakSlovenianSomaliSpanishSudaneseSwahiliSwedishTajikTamilTeluguThaiTurkishUkrainianUrduUzbekVietnameseWelshXhosaYiddishYorubaZulu
Ukufakelwa kweeHira eziTyhila
I-Hose Crimping Machines
I-hydraulic flange 87312 SAE I-J516 Ukufakela ukufakelwa kwamanzi
Ngoncedo olomeleleyo lwabaqeqeshi bethu abanolwazi, sikwazi ukuvelisa i-gamut enkulu ye-Hydraulic flange 87312 SAE J516 eFanelekileyo yokuFakela imveliso yamanzi. Yenziwe ngokugqithiseleyo ngoncedo lweendlela zokucwangcisa usebenzisa umgangatho ophakamileyo okhutshwayo phantsi kolawulo olufanelekileyo lweengcali zobuchwephesha. Izinto eziphathekayo: I-Carbon Steel Technics: Uhlobo oluthileyo: Ukwabelana, amaFlanges Indawo ...
i-carbon steel threaded i-JIC yamashishini okufakelwa kwe-hydraulic e-hose hydraulic hose
Inkampani yethu ikwazi ukwenza ubugcisa ekunikezeni i-carbon steel threaded i-JIC yokufakelwa kwe-hydraulic fittings i-hose hydraulic hose i-jic yokufakelwa kwabasetyhini kubaxumi. i-carbon steel threaded I-JIC yamashishini okufakelwa kwamanzi axhambileyo i-hose ye-hydraulic hose i-female ficings are designed and developed in accordance with the requirements and requirements of customers. Ukwahlula okunikezelwayo kubandakanywa kumadoda ngobuninzi obukhulu, ukuyila, iipateni kunye ...
Ukufakelwa kwee-hose / hydraulic fittings ferrule
Siyinxalenye ebalulekileyo kwi-shishini, ekubandakanyekeni kakhulu ekunikezeni udidi oluphezulu lweempahla zokufakelwa kwee-hydraulic / hydraulic fittings fittings ferrule. Izixhobo zokufakelwa kwee-hydraulic hose / i-hose hydraulic fittings ferrule zenziwe ngokuchanekileyo ngabaqeqeshi bethu abanezakhono basebenzise umgangatho ongcono wezinto ezibonakalayo kunye nobuchwepheshe obuphambili. Ukunikezwa kwezixhobo zokuhambisa amanzi / i-hose hydraulic fittings ferrule zixabiswa kakhulu ...
I-ORFS yiplani yeTyhuthi Isalathiso se-Hose e-Reyable Hydraulic Hose
Singabantu inhlangano ebalulekileyo eyenziwa ekuveliseni nasekunikezeni uluhlu olubanzi lwee-ORFS zesitrato esisePaulStar Reusable Hydraulic Hose Fittings. Ezi mveliso zenziwa ngokusetyenziswa kwezinto ezigqwesileyo ezigqithisiweyo ezivela kwi-relabel kunye nabathengisi abathembekileyo beemarike. Ukufumana iimfuno ezahlukeneyo zabathengi, sinika ezi zifo ze-ORFS zeplani Isalathisi esiyi-Hose Hydraulic Hose ...
I-70011 / 72011hydraulic banjo ifanelekile, i-bsp / imitha ye-banjo yokufakelwa kwamanzi kunye nezixhumi
Sinikeza uluhlu olubanzi lwekhwalithi ephezulu ye-70011 / 72011hydraulic fitness banjo, i-bsp / imitha ye-banjo ye-hydraulic fittings kunye nezonxibelelwano kumakhasimende ethu abalulekileyo. Ngenxa yokusebenza kwazo ngokugqibeleleyo kunye noyilo olungenakulungiswa, le 70011 / 72011hydraulic banjo ifanelekile, i-bsp / imitha ye-banjo yokufakelwa kwamanzi kunye nezixhumi zifunwa kakhulu kwizicelo ezahlukeneyo zoshishino. I-70011 / 72011hydraulic banjo ifaneleka, i-bsp / imitha ye-banjo yokufakelwa kwamanzi kunye nezixhumo zihanjiswa ngaphakathi ...
YH HYDRAULIC Ibhinqa 90 I-Hose Hydraulic Hose Frying Fitting
I-yethu yinhlangano ehloniphekileyo enikezela uluhlu olubanzi lwe-YH HYDRAULIC Ibhinqa le-90 ye-Hose Hydraulic Hose Ferrle Fitting. Zonke iimveliso zethu ziphuhliswa kwisixhobo sethu sokwenza uphando ngokusetyenziselwa izinto eziphezulu. Izinto ezisetyenziswe kwinkqubo yokuvelisa zithengiswa kubathengisi abathembekileyo beemarike. Ngaphezulu, sinika le YH HYDRAULIC Ibhinqa le90 Hydraulic Hose Ferrule Ukufakela kwiindawo ezahlukeneyo ...
I-316 Insimbi Engenasinxibe Umntu weeMetric DIN enesisindo esinamandla Ukufakwa kweeHot
Siyinhlangano ebalulekileyo eyenziwa ekuveliseni nasekunikezeni uluhlu olubanzi lwe-316 Intainless Wireless Male Metric. Ezi mveliso zenziwa ngokusetyenziswa kwezinto ezigqwesileyo ezigqithisiweyo ezivela kwi-relabel kunye nabathengisi abathembekileyo beemarike. Ukufumana iimfuno ezahlukahlukeneyo zabaxumi, sinika lezi zixhobo ze-316 Intainless Steel Metric ...
i-adapter steel adapters jic I-hose ye-hydraulic fit
Ukuze sikhombise indawo ephawulekayo kwishishini, sinikeza uluhlu olubanzi lweendawo ze-carbon steel adapters jic I-hose ye-hydraulic fitting ehambelana nemvelo kwaye isetyenziswa kwimibutho yombane. Sisebenzisa yonke i-carbon steel adapters jic I-hose ye-hydraulic fitting range ukusuka kubathengisi abaqinisekisiweyo kwishishini, abayifumene njengomgangatho osemgangathweni ...
I-Hydraulic Fitting 45 IsiGanga seBSP Isihlalo seTyhini seTyhini
Sinikela uluhlu olubanzi lwe-premium quality ye-XrUMX Degree 45 Degree Isihlalo seTyhini seTyhini kubathengi bethu abaxabisekileyo. Ukusebenza kwabo ngokugqithiseleyo, ukuchasana nokubola, ubomi obude obude kunye nokuyila okungekho nto, kwenza ukuba ezi ziHlurllic Fitting 45 Degree Ibh Ngomnatha wethu wokusabalalisa, sithumela ii-Hydraulic Fitting 45 Degree BSP ...
i-zinc ehlanganiswe kabini isixhobo sokuxhuma kwe-carbon steel steel
Ngoncedo olomeleleyo lwabaqeqeshi bethu abanolwazi, sikwazi ukuvelisa i-gamut eninzi ye-zinc plated double connector hydraulic fitting carbon steel. Yenziwe ngokugqithiseleyo ngoncedo lweendlela zokucwangcisa usebenzisa umgangatho ophakamileyo okhutshwayo phantsi kolawulo olufanelekileyo lweengcali zobuchwephesha. Uhlobo: I-Model Fittings Number: I-P90011 Igama loBrama: YH HYDRAULIC Indawo ...
I-Carbon ifake i-high quality hydraulic hoses kunye nokudibanisa
Sibeke uphawu olucacileyo nolushukumisayo kwiimarike ngokubonelela ngezinga eliphezulu lexabiso leCarbon ngensimbi ephezulu yamanzi kunye nokudibanisa. I-Carbon yensimbi ephezulu ye-hydraulic hoses kunye nokuxhunywa kwenzelwe kubathengisi ekugqibeleni kusetyenziswe izinto ezibonakalayo eziphezulu kunye nobuchwepheshe obuphambili ekuthobeleni nemigangatho yoshishino. Ukongezelela, le ntsimbi yeCarbon iphezulu ikhwalithi ...
I-90 DEEE FLANGE 3000 PSI, ukulungiswa kwee-hydraulic, ipayipi efanelekileyo
Ukuphonononga kumava amakhulu kumashishini, siye sakwazi ukuvelisa i-90 ephawulekayo ye-SAE FLANGE 3000 PSI, ukulungiswa kwe-hose ye-hydraulic, ukulungiswa kwebhubhu. Ezi mveliso zenziwe ngokusetyenziswa kwe-aluminium ephakamileyo, ubhedu kunye nensimbi eyenza iteknoloji ye-CNC. I-90 ye-SAE FLANGE 3000 PSI, i-hose hydraulic fit, i-tube fit ...
I-JIC yowesetyhini insimbi engenamanzi yokufakelwa kwe-Hose
Senza iintlobo ezahlukileyo zeentlobo ze-JIC ezingenasiplastiki ze-Hose hydraulic Hose Fittings, i-JIC yesibini engenamatshini ye-hydraulic Hose Fittings isetyenziswe kumashishini athile afana ne-Automobile, i-Oyile kunye neGesi njl. Senza iimpahla ngokulandelelana ngokwemiqathango ye-DIN 2353 / ISO / SAE / IS , senza iMveliso ye-JIC enezixhobo ezingenasiplastiki ezingenazintambo ezifana neemfuno zabathengi. Izinto eziphathekayo: Insimbi engenasici ...
umgangatho omhle wamathuluzi e-hydraulic tractor banjo amacandelo okucoca afanelekileyo
Siphakathi kwenkampani eyaziwayo kwindawo yokuvelisa, ukubonelela, ukuthumela ngaphandle, ukurhweba. Ukuthengiswa nokuthengiswa komgangatho ofanelekileyo wee-adapters ze-hydraulic i-trash banjo izixhobo ezifanelekileyo ezifanelekileyo. Ezi ziphezulu zivivinywa phantsi kolawulo lweengcali zethu. Ukuqhubela phambili oku kusebenza ngokukhawuleza nokusebenza ngamandla. Ukongezelela kule mveliso esemgangathweni yamashishini asebenzayo asebanjo ...
I-SS304 I-One Piece I-Type Hydraliclic Hose Hose
Singomnye wabanikezeli abadumileyo be-SSXUMUMX Swivel One Piece Uhlobo lweHradralic Fitting Fitting. I-SSXUMUMX Swivel One Piece Intambo yeHray Hydraulic Fitting iyaziwa ngokuba yi-resistivity kwiimeko ezinobungozi, ukwakhiwa okuqinileyo, ukwakhiwa kwe-ergonomically, ubugorha, ixesha elide lokuphila kunye nokugqiba. Senza umgangatho ophezulu we-SS304 Swivel One Piece Type Hose Hydraulic Fitting in ...
I-JIC 45 degree I-Hose Hydraulic Fittings Ukufakwa kwezesetyhini 26741
Ukuxhaswa ngamava oshishino olubutyebi esiwenzayo ekuveliseni, ukuthumela ngaphandle, ukuthengiswa kunye nokunikezela ngeJIC 45 degree. I-JIC 26741 isitifiketi se-Hose Hydraulic Fittings Ukufakwa kwezilwanyana ze-45 ifumaneka kwiinkcukacha ezahlukeneyo zokukhetha. I-JIC 26741 degree Iifayili zeHira eziHlawuliweyo Ukufakelwa kwe-Hose ye-Female 45 yenziwe ngexabiso elivunyiweyo lezinto ezigcinwe engqondweni ...
I-hydraulic fit fit metric in carbon steel hydraulic hose
Singomnye wamagama athembekileyo ukubonelela nge-Hydraulic fit fit tric in a carbon steel hydraulic adapter for customers. Uhlobo olunikeziweyo lwe-Hydraulic fitting metric male in carbon steel hydraulic fit fit is made from high quality grade raw materials. I-Hydraulic fit fit metric male in carbon steel hydraulic fit fit is used in various ...
I-YH HYDRAULIC i-hose ye-hydraulic hose ifaneleka kuzo zonke iintlobo
Inkampani yethu ihlonishwa kakhulu ekunikezeni i-YH HYDRAULIC i-hose ye-hydraulic hose ifaneleka kuzo zonke iintlobo kubaxhasi. I-YH HYDRAULIC ifakwe kwi-hose ye-hydraulic esebenzayo zonke iintlobo zifunwa kakhulu kwiimarike, ngenxa yokwakha okunamandla, ubomi obude, ukuxhatshazwa ngokukhululeka kunye nokuxhatshazwa kwe-corrosion. Ukwaziswa okunikezelwayo lukwadunyiswa kakhulu ngabaxhasi ngokuba neempawu ezingenakuthetha nokuzibonakalisa. Le YH ...
I-Adapter Hose Adapter I-Pipe Yensimbi Engenasici
Singomnye wamagama athembekileyo ukunikela nge-Addraulic Hose Adapter I-Pipeline ye-Stainless Steel Pipe ifanelekileyo kubaxhasi bethu abaxabisekileyo. Uluhlu lwee-hydraulic Hose Adapter I-Stainless Steel Pipe Ukufakela kwenziwa kwinqanaba eliphezulu lekhwalithi ephezulu. I-Adapter Hose Addraulic I-Adapter ye-Stainless Steel Ipayipi Ukufakela kusetshenziswe kakhulu kumashishini athile. Ezi zixhobo ze-Hose Addrawulic Stainless Steel Pipe ...
Uxinzelelo oluphezulu lweengxubevange zee-hose ze-hose Parker Standard
Ngokugcina umkhondo wokuphuhliswa kweemarike zangoku, sinika uluhlu oluhle kakhulu lweengxubevange eziphezulu zengxubevange yamanzi e-Parker Standard.Izibonelelo eziphezulu zengxube ye-hydraulic hose I-Parker Standard ifunyenwe kubathengisi abaqinisekisiweyo beemarike ngokubambelela kwimimiselo ye-industry. ukuvavanya lo mgangatho ophezulu wokuxinwa kwee-hose ze-hydraulic e-Parker Standard ngokubhekiselele kwiiparitha ezahlukeneyo ukuze ...
Malunga neYH Hydraulic
I-Ningbo YH Hydraulic Machinery Factory yasungulwa kwi-2003 kunye nomveliso wayo e-Ningbo, eChina. Ulwandle olukufuphi lusechwepheni lweN Ningbo. YH Hydraulic ngumveliso okhethekileyo ovelisa kunye nokubonelela zokufakelwa kwee-hose ze-hydraulic, iifirrul hydraulic, fayili, iindawo zokuhambisa amanzi, imishini yamanzi, Njl.
I-DX68 CE UMSEBENZI WOKUPHATHA UMSEBENZI we-criming machine 4 "4S 380V 400V 240V
I-carbon steel NPT ye-hydraulic yokukhawuleza i-hose
2 "I-YH51M yokupakisha imishini yamashishini ekuthengiswa kwee-hydraulic
Isixhumi se-hose ye-hydraulic / i-steel container
I-Metric Ibhinqa I-24 I-Degree Cone I-O-RING yokubuyisela i-hose ye-hose ye-hydraulic
Intengo ephantsi! I-CE 9sets yamahhala ifa ngokutshintsha ngokukhawuleza ithuluzi lokukhonkxa komshini wokukhwabanisa
Copyright © Ningbo YH Hydraulic Machinery Factory | Igumbi lokubonisa | Sitemap